Ishedyuli ka-Adana Mersin yoLoliwe kunye namaxabiso eTikiti 2019 | RayHaber
ikhayaETURKEYCoast yaseMedithera yaseMedithera01 AdanaI-Adana Mersin iiHora zeeTeyile neeTikethi zeTikiti
08 / 11 / 2019 01 Adana, 33 Mersin, Coast yaseMedithera yaseMedithera, KwiiNkcazo zoThutho, railway, JIKELELE, ZOMHLATHI, ETURKEY
I-Adana Mersin yeeShedyuli zoLoliwe kunye namaXabiso eTikiti 2019: IAdana yeyona ndlela isetyenziswayo kaloliwe phakathi kweMersin neMersin State Railways. Ixesha lokuhamba umndilili 45 uthatha imizuzu. Ihlobo kunye nexesha lasebusika, ngaphandle kwePhulo leAdana Mersin liqala ekuseni 6: 00 23: 15 'ide iqhubeke. Uhambo lokugqibela phakathi kweMersin no-Adana lwenziwa ebusuku 22: 30.
11 isikhululo sikaloliwe esikhoyo nasemini inkonzo yoololiwe ehambelanayo ye28 Yenziwe. Amatikiti e-Adana Mersin oLoliwe awafumaneki kwi-intanethi okanye kumhla wexesha elizayo. Ke, unokufumana itikiti lakho kwizikhululo zikaloliwe ngosuku lokuhamba. Kuya kuba luncedo ukuba kwisikhululo malunga nemizuzu ye-15 ngaphambi kwamaxesha kaloliwe, nokuba namandla kakhulu. Iindiza zeAdana Mersin eRaybüs ukhonza phakathi kuka-Adana ngaphandle kokuma kwizitishi eziphakathi.
Indlela ka-Adana Mersin yoLayini
I-Adana Mersin ihlala ixesha elingakanani i-Adana Regional Training?
Phakathi Mersin and Adana train ukhwele ithatha malunga 1 10 imizuzu kwiiyure. Oku kusebenza yonke imihla ukususela Adana ukuya Mersin, Adana esiqeqesha.
Izikhululo zoololiwe baka-Adana Mersin
IiShedyuli zeNdiza zeAdana Mersin 2019
Mersin Tırmıl Karacailyas Tashkent Huzurkent TarsUS (Ukufika) TarsUS (Ukuhamba) IYENCE (Ukufika) IYENİCE (Ukuhamba) ngenxa yokholo Şakirpaşa Adana
kwemimirtile Adana Jonga i2019
I-Adana Mersin iiyure zoTeyile
Amaxabiso eTikiti ka-Adana Mersin 2019: Egcwele: 7.5 TL Umfundi: 6.25 Amatikiti okubuyisa iTL: 12 TL
Amaxabiso eTikiti eAdana 2019: Egcwele: 5.5 TL Umfundi: 4.5 Amatikiti okubuyisa iTL: 9 TL
Amaxabiso eTikiti ka-Adana Yenice 2019: Egcwele: 4 TL Umfundi: 3 Amatikiti okubuyisa iTL: 6 TL
Ubhaliso luka-Adana Mersin 2019 (Ngenyanga): Egcwele: 150 TL Umfundi: 120 TL
UKUBHALISWA KWE-TCDD NOKUBHUBA IMITHETHO
ofisi ukuthengiswa kwamatikiti kwisikhululo sikaloliwe kunye amanani kunye neeyure zokusebenza yefowuni.
Adana QEQESHA INDAWO UQHAGAMSHELWANO
Inombolo: 0322 453 31 72 (05.30-21.30)
UQHAGAMSHELWANO WOKUQEQESHWA KWESIFUNDO SE-MERSİN
IXXUMX yangoku amaXabiso eTikiti aSantya seTikiti lamaxesha eYHT…
I-Konya Adana Iimviwo neeTikethi ze-2019
I-Ankara Istanbul Amaxabiso akhawulezayo oQeqeshiso malini? TCDD ...
Amaxabiso eetikiti zeAdana Metro kunye neendlela
Amaxabiso e-Ankara Istanbul
Amaxabiso eTikiti eIstanbul Ankara.
Amaxabiso e-Ankara Eskişehir amaxabiso aphezulu eTreyini yoLoliwe ...
Amaxabiso e-Eskisehir Ankara amaxabiso aphezulu esantya soTikiti ...
Amaxabiso eKitiketi eKonya e-Konya Ankara…
IA Ankara Konya Isantya esiphezulu samaTikiti amaTikiti
Amaxabiso eTikiti eKonya Istanbul
I-Istanbul Konya Isantya esiPhezulu seTiketi samaTikiti
Ixabiso leeTyiti zeYHT kunye nokubhuka kweThikithi yeYHT
Ixabiso leeTyiti zeYHT kunye neShedyuli
Izibonelelo ezikhethekileyo zeAdana Mersin
Iindiza zeAdana Mersin eRaybüs
I-Adana Mersin Iifama zeeTriki ze2019
Adana Tarsus Qeqesha iThikithi
IAdamana Iireyure iiyure
I-Adana Yenice Train Ticket
Imali yeTikiti yeMersin Adana
I-Mersin Adana Iireyure iiyure
I-Mersin Iireyure iiyure 2019
Metro 2019 iiyure zomsebenzi mzi Turkey!